Elona Nqaku liBalaseleyo ndakhe ndalifumana kwiBhlog yam | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 18, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ibhlog yam iye yafumana ingqwalaselo enkulu kwiinyanga zamva nje kwaye abantu bebenobubele kakhulu kwizimvo zabo. Inyaniso yokuba abantu bathabathe ixesha lokundincoma okanye yokundibulela iyamangalisa. Undiqhubela ngokwenene ukuba ndizame ukubeka umgudu ongakumbi kwisithuba ngasinye. Ndinezimvo ezintle ukusukela oko ndaqala ibhlog, kodwa kufuneka ndibelane nawe ngale leta. Yenze usuku lwam ngokupheleleyo! Ikwangumnqophiso wendlela ibhlog enokuba nefuthe ngayo. Phambi kweli nqaku, andizange ndazi nokuba uMitch wayengumfundi… jonga inqaku lakhe:
Ndingumfundi wexesha elide kunye nombhalisi webhlog yakho. Ndifuna ukudubula i-imeyile kuwe ukuze ndikuxelele into endikuyo.
Mna nomhlobo wam, bobabini abafundi abenza isidanga kwiYunivesithi yaseMcGill eMontreal, Canada, basandula ukuphehlelela inkampani entsha yokuxhasa abathengi kwi-Intanethi. Sisebenzise iimfundiso ezininzi kwibhlog yakho ekuphuhliseni inkampani yethu entsha.
Inkampani yethu ibizwa ClixQhagamshela kwaye ibonelela ngenkonzo enobuchule obukhulu yokubonelela ngenkxaso kubathengi kwi-Intanethi. Esikwenzayo kukubonelela ngenkonzo yokuncokola ebukhoma ngaphandle kwiiwebhusayithi zabantu (usebenzisa amaqhosha encoko aphilayo owabonayo kwiiwebhusayithi). Abanini bewebhusayithi bangaphendula kwimibuzo yencoko xa bekho, kwaye xa bengafumaneki, umntu weziko lethu lemibuzo uya kuphendula imibuzo egameni labo, 24/7/365.
Sisiqingatha sesiqhelo. Icandelo elinobuchule obukhulu beClixConnect kukuba sinetekhnoloji entsha kwisoftware yethu eyenza iingcebiso ezincokolayo zenzekelayo kubathengi, ngokusekwe kwimveliso abayibonayo. Ke yithi umntu ujonge isikipa esibomvu kwiwebhusayithi, iwindow yencoko ezenzekelayo inokuvela icebisa ibhulukhwe ebhulowu kubo.
Sichithe malunga neenyanga ezi-6 sicwangcisa oku, kwaye sisebenza nabantu baseCanada, e-US, eRomania nasePakistan ukuyivula.
Ndifuna ukukwazisa ukuba ulwazi olukulo Martech Zone usincede nyani safika kule ndawo sikuyo namhlanje, kwaye siyayixabisa ngokunyanisekileyo.
Enkosi kwakhona uDouglas!
IYunivesithi yaseMcGill BCom 2008
Ndonwabile ngokwenene! Yeyiphi ileta emangalisayo. Andikwazi ukukuxelela ukuba ukufunda loo nqaku kwakuthetha ntoni kum. Ngethamsanqa nge ClixConnect, Mitch! Ndiza kujonga isicelo sakho kwaye ndiza kuqhubeka nokuzabalazela ukukuzisa umxholo oluncedo!
I-Bow Thrusters, iBlogging, kunye noNxibelelwano
Meyi 18, 2007 kwi-9: 06 AM
Oko kupholile kakhulu, ngakumbi kuvela kumfundi. Kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo omnye wabaqeshwa bam uye wemka waya kwiGraduate School eYurophu. Undwendwele kwiiveki ezi-4 ezidlulileyo kwaye wandixelela ukuba i-PR kunye neendlela zokwenza ishishini endibelane naye ngalo emsebenzini apha, zimnike ithuba elinamandla, lokukhuphisana phakathi koontanga bakhe. Ngelo xesha, wayengazi.
Ndachukumiseka kakhulu kuba ungumntu olungileyo kwaye uza kwenza izinto ezininzi ezintle ebomini bakhe.
Ndiqinisekile ukuba baninzi abanye abanjengoMitch abaxhotyisiweyo ngumsebenzi wakho.
Meyi 18, 2007 kwi-9: 28 AM
Enkosi uNeil… izimvo kunye neeleta ezinje ngokuqinisekileyo ziyakhuthaza ngakumbi kunayo nayiphi na ibhonasi. Kwakumnandi ngokwenene ukufunda oku.
Uninzi lwebhlog yam yakhelwe kumagqabantshintshi, ke ndiyakholelwa ukuba linqaku esinokuziva kamnandi ngalo sonke!
Meyi 19, 2007 kwi-6: 34 AM
Unxibelelwano endilufumanayo ekufumaneni amagqabantshintshi yeyona nxalenye inomvuzo yokubhala ibhlog yam, kwaye iyandinceda ndizame ukuya kumxholo ongcono nongcono.
Libali elihle uDoug, kwaye imveliso abayize nayo ngumbono omnandi, ndinokucinga ngokuyisebenzisa kwixesha elizayo.
Ngokuqinisekileyo ndisebenzise uninzi lweengcebiso zakho kwibhlog yam kwaye ngoku ndikufutshane nabafundi abangama-200 (emva kweenyanga nje ezimbalwa) kwi-feedburner, kwaye oko kungenxa yakho.
Qhubeleka nomsebenzi omhle,
Meyi 19, 2007 kwi-9: 27 AM
Opal: Umama weVegan
Meyi 21, 2007 kwi-6: 34 AM
Ndiyazi ukuba loo nto ikwenze waziva umnandi! Izimvo ezilolo hlobo zihlala zikwenza uzive ukhethekile.
Ndinesixa esikhulu se-lurkers kwibhlog yam uninzi lwabo lundithumelela i-imeyile ngamaxesha athile kwaye ngamanye amaxesha bayaphuma kwaye
"thetha" ngamanye amaxesha amagqabaza abo anefuthe elikhulu kum kunalawo avela kubafundi bam besiqhelo kuba bekungalindelekanga kwaphela. 🙂
Ndisandula ukufumana iwebhusayithi yakho malunga nemizuzu engamashumi amabini eyadlulayo. Ndizifundele izithuba zakho ezimbalwa kwaye sele ndibhukhimaki/ ndiqhagamshelwe kuwe ukuze ndibuye xa ndinexesha elingakumbi.
Bendicinga nzulu ngokuthatha ibhlog yam ndiyise kwinqanaba elilandelayo kunye nolwazi oluvela kwiiwebhusayithi, ezifana nezakho, ngokuqinisekileyo ziya kundinceda ekuguquleni amaphupha am abe yinyani.
Bendibhloga ngaphezulu kweminyaka emibini nangona kunjalo, iinjongo zam, kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo ziyatshintsha.
Meyi 21, 2007 kwi-6: 46 AM
Enkosi Vegan Mama! Ndiza kujonga indawo yakho ngokunjalo. AndiyoVegan, kodwa ndinentlonipho emangalisayo ngokuzinikela okufunekayo. Kwaye ngokuqinisekileyo ungumama, owona msebenzi unzima kuwo wonke! NdinguTata ongatshatanga ngoko ndiyazama (kwaye ndoyisakele) ukuthwala iminqwazi yomibini.
Undazise ukuba ndingakunceda ngayo nantoni na!
Meyi 21, 2007 kwi-7: 06 AM
Ngokuqinisekileyo ndiza kubuza imibuzo. Okwangoku andazi ukuba mandibuze ntoni! Ukuthengisa, kwibhlog yam, kusentsha kakhulu kum. Ndiyamamela, ndiyafunda kwaye ndiyafunda.
Ndingumama ongatshatanga kwaye ewe ndiyayazi ukuba uthetha ukuthini ngokuzama ukuthwala iminqwazi yomibini. 🙂